४ जना बच्चाहरू लाई कस्ले कहाँ लग्यो ? अहिले सम्म सम्पर्क मा छैनन्, आमाहरु रुदै मिडिया (धेरै सेयर गरि भेटाउन सहयोग गर्नुहोला) -
Home News ४ जना बच्चाहरू लाई कस्ले कहाँ लग्यो ? अहिले सम्म सम्पर्क मा...
४ जना बच्चाहरू लाई कस्ले कहाँ लग्यो ? अहिले सम्म सम्पर्क मा छैनन्, आमाहरु रुदै मिडिया (धेरै सेयर गरि भेटाउन सहयोग गर्नुहोला)
हामी हरेक दिन घण्टौं बिताएर इन्टरनेटमा आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छौं । तर हामीले आफूसँग तुलना गरिरहेका मानिसहरू को हुन् र उनीहरू वास्तविक जीवनमा कस्ता छन् भन्ने कमै मात्र जानकारी पाएका हुन्छौं ।
हामीलाई ती व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि र उनीहरूले गरेका मिहिनेतबारे पनि जानकारी कमै हुन सक्छ । तर हामी उनीहरूको पृष्ठभूमि नबुझी उनीहरूको सफलतालाई मात्र हेर्छौं र दुःखी हुन्छौं ।
Previous articleग्रेटर नेपाल र राष्ट्र संघमा बृहत छलफल |प्रस्न र प्रमाण प्रस्तुत |गणतंत्र दिवश इन्डियालाई महगो पर्यो (हाम्रो जमिन फिर्ता गर्ने दबाब स्वरुप सेयर गराै)
Next articleभाइ’रल अर्जुन बि.क प’क्राउ। भाईरल arjun bk जे’लमा अर्जुन लाई तीन वटा मु’द्दा ! अर्जुनको परिवार मिडियामा, यस्तो रहेछ कारण (भिडियो हेर्नुहोस्)